TEXAS NA-EJIKERE IZIGA NDI AGHA NCHE NATIONAL GUARD N’OKE AMERICA NA MEXICO – hoo!haa!!
TEXAS NA-EJIKERE IZIGA NDI AGHA NCHE NATIONAL GUARD N’OKE AMERICA NA MEXICO
Texas nke America na-adị njikere iziga ndi agha nche akpọrọ Nationl Guard nakwa ụgbọ ala-ga n’oke ya na mba Mexico. Ọbụ onye isi ọchị agha steeti ahụ gbara ama okwua na ụbọchị Faraidee gara aga.
Onye ọchị agha bụ Brig. Gen. Tracy Norris kwuru na-aga-eziga ndi agha nche ruru naari abụọ na iri ise ka ha gaa na agbata ha na Mxico nke dị otu puku maịlụ na naari maịlụ abụọ na iri ise na anọ n’ogonogo.
Ọ siri na ụdị ike nkwụchaa bụ ezigbo nkwado nye ebum n’obi aka na-achị steeti Texas nakwa onye isi ala America, ihụ na nchekwa dị n’agbata ha na ndi mba ọzọga.
N’atụmatụa Princess Reema jiri kpokọta ndi inyom di puku asatọ na naari abụọ na iri isii ka ojigoro bụrụ ọkaibe n’ụwa niile. Ana-ele anya na nkea ka bụ mbido ya.
Ọ sịrị na-aga-ezigakwa ndi agha ndi ọzọ mgbe achọpụtara ebe nakwa ụzọ achọrọ ka ha rụọ ọrụ.
Norris kwuru na-aga-ezipu ozi n’ ụbọchị Satọdee iji gwa ndi agha achọrọ iga yabụ njem ka bia.
Texas adiwori na mbụ nwee ndi agha nke ndi ọrụ nchea di otu naari, nọ n’ọrụ nche nke agbata mba n’ibe ya ka mgbe afọ 2014.
Onye isi ala Trump ji ikpa nkata maka nchekwa nke agbataa malite izu ụkaa. Ugbua, o zipuwala ndi agha.
Steeti ọzọkwa dị n’agịga mgbada-ọdịda anyanwụ mba America ekwuputala njikere ha maka itinye ndi agha ọrụ nchea n’ọrụ. Steeti Arizona ga-eziga ndi agha dị otu naari na iri ise n’ọrụ nchekwa agbata n’izu ụka na-abịa abịa. Ọbụ ụlọ ọrụ steeti ahụ na-ahụ maka ndi agha gbara ama okwua.
Onye okwuputa okwu ndi ọrụ Pentagon bụ Dana White nọrọ na Tọsdee gara aga kwue na ndi agha nchea ga-enye aka ikwado ndi ọbụ ọrụ ha bụ ichekwa oke ha na ndi mba ọzọ.
Na mbụ onye ode akwụkwọ nke nchekwa bụ James Mattis kwuru na ngalaba ya na esi imi n’ala imara ụzọ ha ga-esi kwado ndi ọrụ nchekwa ime obodo. Ọ sịrị na ọrụ ha ga-eso ụzọ iwu nakwa ndi omebe iwu siri chọọ ya.
N’ozi nke onye ode akwụkwọ nchekwa nke ime obodoa bụ Kirstjen Nielsen tinyere aka, ha sịrị na ana akpọlite ndi agha nche National Guard ka ha nye aka na nchekwe oke nke agiga mgbada ọwụwa anyanwụ. Ha sịrị, na ọrụ ha na ndị aka na-achị akụkụ ha na ndi mba ọzọ nwegasịrị oke na-arụ mere ka ha bụ ndị na ahụ maka nchekwa ime obodo mata ebe ọdị mkpa na ndi agha nche National Guard ga-enye aka.
Onye isi ụlọ ọrụ National Guard bụ Gen. Joseph Lengyel mere ka amata na-ana atụ anya na ndi agha di naari ise ka-aga-achọ maka ọrụa.
Ọ sịrị na ana-ezipu ndi agha dị narri ise tinyekwara ụgbọ ala-ga, ngwa agha nakwa ụgbọ elu hilkọpụta na-egbughị oge maka ọrụa.
Previous Post: OSINBAJO AKWADOLA IHAZIGHARI NIGERIA
Next Post: ADEBOYE ADỌKWALA AKA NA NTỊ ỌZỌ MEGIDE ỊCHỌ DI NA NWUNYE N’IKUKU